रानीतलाउमा बोटिङ बिहार, पारिलो घाम र सेल्फीको संगम (फोटोफिचर) – Satyapati
रानीतलाउमा बोटिङ बिहार, पारिलो घाम र सेल्फीको संगम (फोटोफिचर)
आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य
कुमार श्रेष्ठ -
कुमार श्रेष्ठ । बाँके । पुसको अन्तिम साता । हिमाली जिल्लातिर हिउँ परेको छ । अत्याधिक गर्मीको शहरका रुपमा चिनिने नेपालगन्जमा चिसो बढ्दै छ । हिमालमा परेको हिँउको असर पनि हुन सक्छ । मंगलबार प्याब्सन डे पनि । स्कुलहरु बिदा छन् । दिउँसो पारिलो घाम लागेको छ । बिदा र पारिलो घामको मज्जा लिन एकथरि रानीतलाउ पुगेका छन् ।
रानीतलाउ अर्थात् नेपालगन्जको पहिचान जोडिएको ठाउँ । चारैतिर हरियाली रुखहरु । बच्चाहरु रमाउने झुला । अनि बीचमा पोखरी (तलाउ) । पारिलो घाममा बोटिङ गर्दै सेल्फी खिच्नुको छुट्टै मज्जा । स्कुल बिदाको फाइदा उठाउँदै नेपालगन्जका अनिल श्रेष्ठ छोरा लिएर रानीतलाउ पुगेका छन् । ‘वाह ! घाम ताप्दै बोटिङ बिहार गर्न मज्जा आयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘रानीतलाउ नेपालगन्जको पर्यटकीय क्षेत्र हो । उपमहानगरपालिकाले वर्षौपछि सञ्चालनमा ल्याएर राम्रो काम गरेको छ ।’
बाह्य पर्यटक नेपालगन्ज आउदा या यहीका बासिन्दाहरु घुम्न निस्कदा पुग्ने ठाउँ भनेको रानीतलाउ नै हो । यो बाहेक प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर र महेन्द्र पार्क अर्को पर्यटकीय ठाउँ हुन् । वाटरपार्क बन्दैछ । मंगलबार दिउँसो रानीतलाउमा पुग्दा पारिलो घामको मज्जा लिदै बोटिङमा सेल्फी लिनेको भीड नै थियो । कोही परिवार त कोही साथीसंगीका साथ त्यहाँ पुगेका थिए । कात्तिक २० गतेदेखि रानीतलाउ सञ्चालनमा आएको छ ।
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दोस्रो पटक रानीतलाउ बोटिङ बिहारको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसअघि २०५८ माघ २८ गते उद्घाटन गरिएको रानीतलाउ बोटिङ बिहार चार वर्षपछि बन्द भएको थियो । नेपालगञ्ज वडा नम्बर–८ मा अवस्थित रानीतलाउ घरपरिवार या साथीसंगीसँग घुम्ने ठाउँको रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।
ठेक्कामा जाँदै, वडाध्यक्षको असन्तुष्टि
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रानीतलाउ बोटिङ बिहारलाई ठेक्कामा दिने तयारी गरेको छ । वार्षिक २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागि सकेको छ । ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको सूचना अधिकारी शरद पौडेलले बताएका छन् । उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएर रानीतलाउ बोटिङ विहार सञ्चालन गर्न थालेपछि वडा नम्बर–८ का अध्यक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ताले आफ्नो ठाउँको आम्दानी आफूहरुले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘हामी के अब चौकीदार मात्रै हुने हो र ? हाम्रो ठाउँमा भएको फाइदा हामीले पाउने कि नपाउने ?’ वडाध्यक्ष गुप्ताले भने । ठेक्कामा नगएकाले अहिलेसम्म वडा कार्यालयले रानीतलाउ बोटिङ बिहार सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
कात्तिक २५ गतेदेखि टिकटको व्यवस्था गरेको वडा कार्यालयले अहिलेसम्म तीन लाख ८० हजार संकलन भएको जनाएको छ । त्यहाँ ५ रुपैया टिकट र बोटिङ गरेको २५ रुपैया लिने गरिएको छ । वडाले संरक्षण र सञ्चालन गर्नु पाउने आवाज उठाउदै आएका वडाध्यक्ष गुप्ताले ठेकेदारमार्फत् सञ्चालन गरिँदा फेरि लापरबाही हुने बताए ।
‘हाम्रो वडामा रानीतलाउ भएको हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले पटक पटक आवाज उठाइरहेको छु । रानीतलाउ बोटिङ बिहार वडाले सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ,’ वडाध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘वडाबासीलाई खुशी बनाउन बिहान ६ देखि १० बजे र साँझ ६ देखि ८ बजेसम्म खुल्ला छोड्नु पर्छ । अनि बल्ल वडाबासीले अपनत्व महसुस गर्छन् ।’
एसिड पीडितका पक्षमा सरकारले ल्यायो अध्यादेश, जन्मकैदसम्मको सजायँ हुने